AKHRISO: Ergaygii hore ee QM Soomaaliya oo ka hadlay Tukaraq iyo xaaladdeeda. – Puntlandtimes
AKHRISO: Ergaygii hore ee QM Soomaaliya oo ka hadlay Tukaraq iyo xaaladdeeda.
September 14, 2018 W LAASCAANO
NEW YORK(P-TIMES)- Ergaygii hore ee Qaramada Midowbay u qaabilsanaaa Soomaaliya Micheal Keating oo xalay khudbadiisii ugu dambeysay ka jeediyey Xarunta Qaramada Midowbay ayaa si rasmi ah uga hadlay marxaladdaha Soomaaliya ee dhinacyada Ammaanka,dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Ergaygu wuxuu amaanay hanaanka Soomaaliya ay wax uga codsadaan,waxaana uu diiradda saaray arrimaha muhiimka ah oo dhan, isagoo sheegay in marxaladdaha loo-marayo ay xaaladdu tahay mid soo hagaagayso.
Mr. Keating wuxuu ka hadlay arrimaha hadda ka taagan ee gobalka Sool oo ay isku hayaan maamulada Puntland iyo Somaliland,wuxuu sheegay in ay welwel ka qabaan marxaladdaas oo ay xooga saarayaan in la baajiyo dagaal dhaca.
Ergaygu wuxuu sheegay in ay Qaramada Midowbay iyo Urur gobaleedka IGAD door weyn ka ciyaarayaan sidii dagaal oo dhan loo baajin lahaa, haddana ay qeybaha ugu horeeya isku raaceen oo ah in dagaal labaajiyo.
GAAS inuu ku fashilmay TUKARAQ oo doonistii shacabka sharafta leh ee reer PUNTLAND xagal daaciyay muxuu u qiran waayay? Su’aashaas PUNTLANDtimes web-ka Gaas u ololeeya baa laga sugayaa jawaabteeda.